အမျိုးသားများနှင့် ထိပ်ပြောင်ခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
● အစားအသောက်နှင့် နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်ခြင်း
● ရောဂါအချို့နှင့် ဆေးဝါးများ စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အများစုမှာမူ မျိုးရိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီး “အမျိုးသားပုံစံထိပ်ပြောင်ခြင်း” ဟု ခေါ်လေ့ရှိပြီး အောက်ပါလက္ခဏာတို့ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
● ဆံပင်များ တဖြည်းဖြည်းပါးလာခြင်း
● ဆံပင်ပေါက်ရာလိုင်းမှာလည်း နောက်ရောက်လာပြီး မြင်းခွာပုံစံဖြစ်လာခြင်း
အချို့အမျိုးသားများတွင် ဆံပင်ပါးခြင်းမှာ အသက် 20 မတိုင်မီတွင် စတင်လေ့ရှိပြီး အသက် 50 အရွယ်တွင် 85 ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသားများ၌ သိသိသာသာထိပ်ပြောင်ခြင်းကို ခံစားနေရပြီဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးကိုပြုပြင်၍ မရနိုင်သော်လည်း ထိပ်ပြောင်ခြင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်
● ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအစာများကို စားပါ။
● ခေါင်းဖြီးချိန်နှင့် ခေါင်းလျော်ချိန်များတွင် ဆံပင်ကို ညင်သာစွာ ကိုင်တွယ်ပါ။
>> ဆံပင်ပြန်ပေါက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်၍ ဆံပင်ပေါက်ဆေး အသုံးပြုပါက ဆံပင်ပြန်ပေါက်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ရုံမျှမက ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဆံပင်စိုက်ခြင်းသည် ခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်ဦးရေပြားနောက်ဘက်မှ ဆံပင်များကို အရှေ့ဘက်ပြောင်နေသောနေရာတွင် ပြန်စိုက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
>> ဆံပင်ထူတယ်လို့ထင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
သင့်တွင် ဆံပင်ပိုမိုများပြားသည်ဟု အထင်ရှိစေသော အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ -
● ဆံပင်ကို ထူသယောင်ဖြစ်စေသော ဆံပင်ဖြန်းဆေးများကို သုံးစွဲပေးပါ။
Dr. Moe Thauk Pan (www.drmyanmar.com)
၁၈.၁.၂ဝ၂၁ | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမေရိကန်အရေပြားဆိုင်ရာအဖွဲ့က အမေရိကမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး သန်း ၈၀ လောက်မှာ မွေးရာပါအမွေးကျဲပါးတဲ့ရောဂါရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါက ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ပဲကျွတ်တာ ဖြစ်နိုင်သလို တစ်ကိုယ်လုံးကအမွေးတွေနဲ့လည်း ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ဆံပင် ဘယ်လောက်ကျွတ်လဲဆိုတာကို ရေတွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ခေါင်...
၁၄.၁.၂ဝ၂၁ | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
3. အနီရင့်ရောင်၊ အဝါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်ရှိသော အသီးအနှံများ
5. ပင်လယ်စာ အမျိုးမျိုး
7. အိုမီဂါ3ပါဝင်သော ငါးများ (ဆာဒင်းငါး၊ ဆ...